Screen kupenya bvunzo yeApple Watch 6 vs Apple Watch 5 | Ndinobva mac
Apple Tarisa 6 vs Apple Tarisa 5 skrini kupenya bvunzo
Imwe neimwe nyowani nhevedzano yeApple Watch inosanganisa nhevedzano nyowani yekuvandudza kupfuura iyo yemhando yapfuura akateedzana. Vamwe vakakurumbira, sezvakaita skrini «Nguva dzose»Yeakateedzana 5, kana oximeter yezvakateedzana 6, asi vamwe vanoenda vasina kucherechedzwa, kana iwe ukasaenzanisa maviri akateedzana parutivi.
Uye izvo zviri kuitika nechiratidziro cheiyo nyowani Apple Watch Series 6. Iyo ine kuwedzera kupenya kupfuura yegore rapfuura mashanu akateedzana. uye izvo zvinoonekwa kana uchizvitarisa muzuva rose, pasina kupokana. Ngatione vhidhiyo yekufananidza uko kunoonekwa mutsauko weiyi skrini.
Chimwe chezvinhu zvitsva zveApple Watch Series 6 ndiko kuwedzera kupenya kwechidzitiro, chimwe chinhu chinokosheswa kana uchitarisa pachigadzirwa. zuva rakazara. Ivo vakomana veIClarified vatora mita yemhando yepamusoro uye vakatarisa chaizvo kana paine kupenya kwakawanda pachiratidziro chemutsva mutsva.
Kuti vaite iyi bvunzo ivo vakawedzera kupenya kwechiratidziro kusvika pakukwirira pane zvese zvishandiso uye vakaremara ruoko rwekuonekwa. Ivo vaishandisa chena pikicha kumashure pawadhi kumeso kuyedzwa. Sezvatarisirwa, iyo Apple Watch Series 6 skrini yaive ne kuita kwakanaka kupfuura iyo Apple Watch Series 5.
Chikepe chakakurumidza kuona kuti iyo 5 akateedzana ambient mwenje sensor yaive yakaoma panguva yekuyedzwa. Akabva atanga kudzima chidzitiro pavakangovheneka nhanho. Izvi hazvina kuitika ne Series 6. Iyo mita yakasvika pakukwirisa kwakanyanya kwe 476 nits (cd / m2) paApple Watch Series 6 ichienzaniswa ne 422 nits (cd / m2) paApple Watch Series 5, kunyangwe iyo Series 5 kuyera kwainetsa kuuya nayo sezvo yakabva yatanga kudzikira kusvika kutenderedza 234 nits.
Iyo inogara iri-inoratidzwa yeApple Watch Series 6 yakapa kupenya kwakakwirira kupfuura iyo Apple Watch Series 5 a 16 nits, achienzaniswa na 12 nits Series 5s yakadzikira nekukasira kungoita 1 nit. Kune iyo yenguva-pabvunzo, kupenya kwemufananidzo wepashure kwakayerwa. Zvichienderana nechiso chekutarisa, zvinhu zvakasarudzwa senge nguva yedhijitari kana wachi rinotaridzwa padanho rekujeka rakakwirira kupfuura kumashure.
Muchidimbu, iyo skrini yeApple Watch Series 6 inopenya kupfuura yakatangira. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti, musimboti, haina kukanganisa kuzvimiririra kwechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Tarisa 6 vs Apple Tarisa 5 skrini kupenya bvunzo
EazyDraw, iyo vector dhizaini kunyorera kune wese munhu
Imwe yeRocks inorova dzimba dzemitambo muUnited States